इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य जीवन द्वारा
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू क्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरू इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरी फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैलाई उपनामद्वारा चिनिन्छ; "Hen"। हाम्रो इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनबल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई उनीहरूको बचपनको मिति सम्म ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको चमकदार प्रदर्शनको बारेमा एक विन्जर वा दोस्रो स्ट्राइकरको रूपमा जान्दछ। यद्यपि, केवल इवान पेरिसिक बायोका बारेमा केही उल्लेखनीय छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
इवान पेरिसिक2मा जन्मिएको थियोnd फेब्रुअरीको दिन, 1989 लाई उनको आमा, टिहाना पेरिसिस र बुबा एंटी पेरिसिकमा विभाजित, क्रोएशिया.
इवान पेरिसिक खेतीको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। आफ्नो आमाबाबु संग एक साथ, इवान आफ्नो एक र एक मात्र बहिनी, अनीता पेरिसको साथ बढ्यो। त्यसपछि तिनको बचपनको समयमा, उनका साथीहरूले उहाँलाई बोलाए कोका जुन शाब्दिक अर्थ हो "गर्न" आफ्नो मूल भाषामा। The "Hen"उपनाम आयो भन्ने कुराको कारण बनेको थियो कि युवान इवानले सधैं आफ्नो बुबाको सहयोगमा देखेका थिए गर्न कुखुराको खेती बस आफ्नो गृहनगर ओमिस बाहिर क्रोएशन्ली तटमा।
एन्टे (इवानका पिता) र तिनको परिवारको लागि ह्यान्स पाउने ठूलो व्यवसाय थियो। उपनाम भनिने बावजूद "Hen", इवानले आफ्नो पिताको व्यवसायमा गर्व गर्नुभन्दा धेरै कुरा गरेन।
इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य- फूट प्रेम र बलिदान
सहयोगीहरूलाई कुखुराको खेतीमा आमाबाबुलाई सहयोग पुर्याउन, जवान इवानले प्रारम्भिक फुटबलमा एक प्रतिभा विकास गरे। उनले फुटपाथ खेल्न आफ्नो खाली समय प्रयोग गरे र खेलको लागि उनको जुनूनले उनलाई स्थानीय टोलीमा नामाकरण गरे, Hajduk Split जसले उनलाई आफ्नो प्रतिभा को प्रदर्शन गर्न चरण दिए।
इवानको खोजीमा उनीहरूको क्यारियर निकै गम्भीर छ र अर्को स्तरमा पेरिसिक परिवारको लागि वित्तीय समस्या थियो। तिनका आमाबाबुले आफ्नो अकादमी शुल्क तिर्न सक्दैनन्। पैसाको साथ आउन आवश्यक छ ठूलो बलिदान आफ्नो पिता को लागि जो आफ्नो कुखुरा को खेत को स्टक बेचने को लागि उनको छोरा को क्यारियर को मांग को हेरचाह गर्न को लागि।
इवानको बुबा, अन पेरिस्सी एक व्यक्ति हो जसले आफ्नो छोराको लागि लगानीमा विश्वास गर्दछ भने पनि यसको अर्थ हरेक सम्पत्ती छ। एंटे क्रोएशिया मा आफ्नो छोरा को सर्वश्रेष्ठ फुटबल अकादमी मा मुद्रा भेजने को लागि उनको पोल्ट्री उपकरण को एक बोली मा बेच दिए।
आफ्नो परिवार अपग्रेड र चलिरहेको बोलीमा, एन्टले क्रेडिटमा कृषि उपकरणहरू खरीद गर्न थाल्नुभयो, पछि पछि उनलाई समस्यामा परेको थियो (इवान पेरिसिक परिवार तथ्यमा तल वर्णन गरिएको)। एन्टी पेरिसिक उनको पुत्र को बाटो को हरेक चरण मा थियो।
इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य- अन्तिम बलिदान र प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
यद्यपि, पारिवारिक कुखुरा व्यवसाय थियो जसले इवानको क्यारियरको सुरुवातको लागि पाठ्यक्रम तय गर्यो। इवानले6ठोस वर्षहरू Hajduk मा बिताए, आफ्नो फुटबल खेल्दै र स्कूल जानुभयो। आफ्नो पोल्ट्री उपकरण खरीदबाट आफ्नो विभागको साथ संघर्षको बावजूद, इवानको दर्शनदार पिताले अर्को ऋण लिने निर्णय गरे। यो समय, आफ्नो क्यारियरमा ठूलो अवसर प्राप्त गर्न फ्रान्समा फ्रान्स पठाउनको लागि ऋण रकम प्रयोग गरिएको थियो। यस समयमा, इवान को सोचेक्स द्वारा परीक्षण को लागि बुलाया गएको थियो, प्यूजोट परिवार को एक प्रमुख सदस्य जीन-पिएर्रे पिजुयो द्वारा स्थापित एक फ्रेंच क्लब।
जवान इवानको लागि, फ्रान्स जाने क्रममा आफ्नो क्यारियरमा अवसर प्राप्त गर्ने प्राथमिक उद्देश्य स्वतन्त्र रहन र आफ्नो बुबाको ठूलो ऋण चुकाउन पैसा कमाउन थालेको थियो।
एक शक बिना, धेरै पैसा यो उनको चाल मा पंप गरिएको थियो Sochaux। यो कदम 2006 / 2007 सीजनमा भयो। उनीहरूको लागि सौभाग्य देखि, इवानले पहिले नै क्लबको लागि पहिलो खेल खेलेको जिते जिते। त्यो गर्मी, 2006 मा, फ्रान्सेली समाचारपत्रहरु एक बारेमा लेख्न थाले घुम्न पाउँदैनन् तल चित्रित जो भीड लाई प्रभावित गर्न को शौक थियो।
इवानको प्रभावशाली प्रदर्शनले बेल्जियमलाई आफ्नो कदमको नेतृत्व गर्यो जहाँ उनले विश्वास गरे कि त्यो छिटो बढ्दै गयो। इवान क्लब ब्रुग मा जाने पछि पहिले रोसेलेयर मा एक ऋण संग शुरू गर्यो जहां उनले अंत मा आफैले एक नाम बनाए। बेल्जियम क्लब संग, इवान बेल्जियम प्रो लीग को लक्ष्य वाला गोल र 2011 को लागि बेल्जियम सर्वश्रेष्ठ फुटबलर साल बन गयो।
यो प्रकार्यले उनलाई उत्प्रेरित गरे बोरुसिया डर्टमन्ड जहाँ उनले 2011-12 बंडेसलिगा जीता। यस समयमा, उनी अब उप्रान्तको रूपमा चिनिने थिएनन् घुमिरहेको बालबालिका, तर एक परिपक्व र घातक फुटबलर पंख मा र लक्ष्य को सामने। VfL Wolfsburg र अन्तर मिलानले उनको यात्रा अर्को र बाकी पछि लागे, किनकि उनि भन्थे, अब इतिहास हो।
इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
प्रत्येक सफल क्रोएशन् फुटबलरमा, ग्लैमरस वाग, प्रेमिका र पत्नी हो। इवान पेरिसिकले आफ्नो बचपन प्रियंका, जोसिपालाई हाई स्कूलमा भेटे। त्यसपछि पछि, प्रेमीहरू दुबै साथीहरू थिए जसले कक्षामा एउटै विद्यालय बेंच साझा गरे।
दुबैको सम्बन्ध उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो मित्रको रूपमा सुरू भयो र पछि एकअर्कासँग सामेल भयो। इवान र जोसिपाले आफ्नो समय बोरुस डर्टमुन्डसँग 2012 मा विवाह गरे। उनीहरूको विवाह पछि तिनीहरू खुसी हुन्थे।
एकैसाथ, दुबै जोडीहरू मानेजुएला र एक जना छोरा, लियोनार्डो नामक एउटी बेटी छ जुन तिनकी बहिनी भन्दा तीन वर्षको उमेरमा छ। लियोनार्डो पेरिसिकलाई वोल्फसबर्गमा जन्मिएको थियो र उनीहरूको बुबासँग धेरै बलियो बन्धनको बारेमा भनिएको छ जसले विश्वास गर्दछ कि उनका पुत्र केहि जस्तै उनको फुटबलर बन्यो। यो समय, बिना कुनै आर्थिक संघर्ष बिना उनले आफ्नो परिवार संग अनुभव गरे।
इवान पेरिसिक उनको परिवारको लागि पूर्णतया समर्पित छ। तपाईं ऊ धेरै प्रचारक चाहानुहुन्छ, इवानले एक पटक स्विट्जरल्याण्डमा झील Lugano को सुन्दर परिदृश्य को सामने आफ्नो परिवार संग एक तस्वीर लिनुभयो।
इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक तथ्यहरू
मोनियस इवान पेरिसिक फुटबलमा उनको परिवारको लागि उपयोगी थियो। उनले आफ्नो आमा, बहिनीको हेरचाह गरे र आफ्नो उपकरणलाई जीवित राख्न को लागी ऋणमा किन्न लागेका कृषि उपकरणबाट आफ्नो बुबाको ऋण बसे।
एक स्रोतको रूपमा दावी गरे, कृषि उपकरण एन्टीले कर्जा लिइसकेपछि समयमै भुक्तान गरेनन् र यो कानूनी लडाइँहरू आइपुग्यो जुन वास्तवमा पेरिसिक परिवारको डरलाग्दो थियो। उनीहरूको डर अन्ततः अन्त्यमा आइपुग्यो किनभने इवानले हरेक एकल पैसा कमाए।
इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -क्यारियर तथ्यहरू
इवान पेरिसिक एकपटक एक साथ भयो जर्गन क्लप्प डोर्टमुन्डमा समय खेलिरहेको अभावमा। Klopp तल चित्रण को पेरिसिक को रैंट्स मा म्यूट राखिएको छ र एक पल्ट उनलाई "बालबालिका"उसको व्यवहारको कारण। आदर्श रूपमा इभान पेरिसिक बेन्चमा बस्न मन पराउँदैनन्। जब यस बारे मा अन्तर्वार्ता, उनले भने;
"जब म बेंचमा बस्छु, म मरिरहेको छु," खेलको लागि मलाई सजायजस्तै खेल खेल्दैन। मलाई यो जान्न थियो कि यो कसरी राम्रो तरीका बारे पेशेवर हुन। म मानसिक रूपमा परिपक्व हुनु पर्छ "
इवान पेरिसिक जूभ्नेस दाताहरूको लागि मित्र होइन। रिस उठाउँदा, उनीहरूले आफ्नो प्रतिद्वंद्वीलाई गर्दन र जबरजस्ती देखाउँदा जस्तो देखियो जुआन कुडाराडो र अल्भारो मोराटा.
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो इवान पेरिसिक बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
डान्स लन्डन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
लूका मोररिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य